Maraykanka, 01 September 2016
Khamiis 1 September 2016
Wareysi Booqashada John Kerry ee Afrika
Xog-hayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, ayaa booqasho ku mara qeybo ka mid ah Afrika.
Mareykanka: Waan Garab Taagannahay Soomaaalida
Dowladda Mareykanka ayaa cambaareysay laba qarax oo is-maadin ahaa oo shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyto ee gobolka Mudug, kuwaasi oo 20 qof lagu dilay.
USA: Haweeney 50 Bilood Xabsi ah Lagu Xakumay
Haweeney deggan gobolka galbeedka Mareykanka ku yaalla ee Kalaforniya, ayaa lagu xakumay 50 bilood oo xabsi ah, kadib markii lagu heley dambi ah inay isku deyday inay Shiinaha u dhoofiso agabyo dayuurado dagaal, Drone iyo xogahooda ku saabsanaa farsamada.
Donald Trump oo Ku Wajahan Minnesota
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa maanta lagu wadaa inuu tago musharraxa xisbiga Jamhuuriga ee madaxweynenimada Maraykanka Donald Trump.
Wareysi ku Saabsan Siyaasadda Dhaqaale ee Clinton
Musharaxa Madaxtinnimo ee xisbiga Dimuqraaddiga Hillary Clinton, ayaa magaalada Cleveland ee gobolka Ohio Arbacadii shalay ka jeedisay qudbad ay kaga hadleysay siyaasaddeeda dhaqalaha ee ay dooneyso inay ku dhaqanto haddii loo doorto xilka madaxtinnimada.
Trump oo Is-beddel ku Sameeyey Ololihiisa
Musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa is-beddel ku sameeyey ololihiisa doorasho, wax ka yar saddex bil ka hor inta aysan dadweynaha Mareykanka u dareerin goobaha codbixinta.
Warbixin: Soomaali Beeraley ku ah Maine
Tan iyo bartamihii sanadahi 2000, waxaa isasoo tirayey tirada Soomaalida beeralayda ah ee dalkan Mareykanka.
Joe Biden Oo Booqandoona Turkey
Aqalka Cad ee loogaga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay Jimcihii, in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden uu booqasho rasmi ah ku tagi doono dalka Turkiga, dhamaadka bishaan.
Dhalinyarada Africa Oo Ka dooday Hal-abuurka Ganacsiga
Shalay waxaa meelo badan oo aduunyada ah looga dabaal dagay maalinta ay Qaramada Midoobay u asteysay maalinta Dhalinyarada Aduunka.
Dhaqaatiir Suuriyaan ah oo Warqad u Qoray Obama
Koox Dhaqaatiir Suuriyaan ah oo ku sugan magaalada Aleppo ee Woqooyiga Syria ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama u qoray warqad ay ku qeexayaan xaaladda liidata ee magaaladaas, waxayna ka codsadeen tallaabo lagu joojinayo weerarada ka dhanka ah rayidka.
Booliiska Baltimore, USA oo Eedo loo Jeediyey
Kevin Davis oo ah Taliya Ciidanka Booliiska ee Baltimore ayaa sheegay in warbixintu ay tahay eedeyn loo jeediyey saraakiisha booliiska ee Baltimore, kuwaas uu sheegay in badankoodu ay warbixinta xadgudub u arkeen.
Minnesota: Ilhaan Cumar oo ku Guuleysatay Doorasho
Ilhaan Cumar ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee xisbiga Dimuquraadigu ay u soo sharaxaan Golaha wakiilada ee gobalka Minnesota.